Mootummaa Ceehumsaa Dhaabbatchuun Furmaata! – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooMootummaa Ceehumsaa Dhaabbatchuun Furmaata!
Mootummaa Ceehumsaa Dhaabbatchuun Furmaata!
[EWO/ORG- Fulbaana 6, 2020]Daba Seenaa Fakkaataa Tahe Akka Hin Uumamneef Imaammata Eegdoota Warraaqsa Oromiyaa (EWO) Hojiitti Hiikuun Furmaata Ijoo Gama Hundaati!
Daba seenaa fakkaataa tahe mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti akka hin uumamnee fi qabsoon mirga ofiin of bulchuu bifa bara ceehumsaa (1991) sanatti qaamolee fakkaatoon wal tumsanii injifannoo Oromoo fi lammiilee Oromiyaa saaman sana ammas akka irra hin deebine Imaammata ifaa fi nul’ataa tahe kan Eegdoota Warraaqsa Oromiyaa (EWO)n fulbaana 20-2019 ibsa baase keessatti lafa kaahe sana of qusannoo tokko malee hojiitti hiikuun fala furmaata ijoo fi gama hundaa tahee argama.
Hatamuun injifannoo QBO 1991 TPLF fi EPLF waliin tahuun nurna ayyaan-laallattootaa fi ergamtoota isaanii OPDO dheengaddaa, ODP kaleeaaa fi bilxiginnaa baanamu kan har’a seeraan ala of labsee aangoo siyaasaa empaayera xoophiyaa harkaa qaba jedhu kanaan miseensoota, deeggartootaa fi hoogganoota ABO akkasumas dhaabbilee saboota biroo adamsanii hidhuu, ajjeesuu, biyyaa baqachiisuu fi achi buutee dhabamsiisuun qabsoo mirga hiree murteeffannaa gara dabarsanii sirna hacuuccaa gama hundaa diriirsuun waggoota kudhanoota sadan darbaniif Ummattoota biyyattii bittaa kololii hamaa jala tursuun isaanii beekamaadha.
Haaluma wal fakkaatuun baroota lamaan dabarsine keessatti qaamoleen sadan olitti ibsaman kanneen yeroo ammaa waltahiinsa fakkaataa qabaatchuu baatanis TPLF akka naannoo isaaniitti EPLF fi gareen shororkeessaan haftee sirna kaleessaa akka xoophiyaatti gochaan isaanii hin jijjiiramne. Akkuma baratame sanatti ABO, WBO fi qaamolee qabsoo sabootaa geggeessaa jiran gufatchiisuuf carraaqaa jiru.
Hoogganootni, miseensootnii fi deeggartootni ABO haaluma bara ceehumsaa sanaan adamsamuu fi roorroo fakkaataan irratti raawwatamaa jiraatchuun seenaa fakkaataan irra deebiin mul’achaa jiruudha.Sodaa sirna gita bittuu xoophiyaa keessa jiru ammas muutummaan ceehumsaa seerawaan akka hin dhaabbanbee fi qabsoon sabaa akka hin milkoofne maseensuudha.
Imaammatni EWOn kan mootummaa ceehumsaa akka oromiyaatti ijaaramuuf dhaabbilee siyaasaa Oromoo ABO,KFO fi kan birootiin taligammee saboota akka naannoo isaaniitti ceehumsaa ijaarrachuuf fedha qababiif tumsa taasisuu fi waan dandahu maraan bira dhaabbachuuf akeeke sana akka gufatu ijibbaata taasisaa jiru. Kanaafis hojii diigumsaa keessaa fi alaalaan qabsoo sabootaarratti geggeessaa jiran dura dhaabbannoo waloo qabsaahoota mirga hiree murteeffannaa taasisaniin akka fashalu abdii guddaa qabna.
Mootummaa ceehumsaa dhaabbatchuunis furmaata haala yeroo wal falmisiisuu hin qabne tahuu irra deebinee yaadachiisna!
Oromiyaan Haa Dursitu!Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaati!
Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo waraana mootummaa keessa jiraniif Qawween Sabaa fi Dantaa Sabaaf! #Miseensota_Raayyaa_Ittisa_Biyyaaf…
Ethiopia on the brink of break up as tensions escalate
Mootummaan cehumsaa kun heera Xoophiyaa amma jiru (kan multi-ethnic federation irratti hundaa’ee) akkamitti ilaalaa? Yeroo mootummaa cehumsaa kana keessa Heerichi akkuma jirutti tura moo heera haaraatu tumamaa?